Odayaasha & waxgaradka degmada Taleex oo ku eedeeyey Somaliland shaqaaqadii shalay ka dhacday halkaasi. – Radio Daljir
Taleexc, Dec 12 – Caaqil Ismaaciil Cali koore oo kamid ah waxgradka iyo odayaasha miisaanka kuleh degmada Taleex ee gobolka Sool oo maanta la hadlay idaacada Daljir ayaa faah-faahin dheeraad ah ka bixiyey shaqaaqo shalay ka dhacday degmada Taleex ee gobolka Sool, halkaasi oo ay ku dhinteen laba qof saddex kalena dhaawac ka soo gaarey.
Ismaaciil Cali Koore, waxaa uu sheegay in malleeshiyaad kasoo jeeda degmada Taleex oo ka amar qaata Somaliland ay weerar ku qaadeen gaari uu watey ganacsade kasoo jeeda degmada Taleex oo kasoo kicitimey magaalada Garoowe kaasi oo ay rasaas ku fureen xilli uu soo galayey gudaha magaalada Taleex,
Arintani ayaa loo aanaynayaa inay daba socoto dhacdo hadda ka hor ka dhacday gudaha degmada Taleex ee gobolka Sool, taasi oo lagu qabqabtay saraakiil u shaqaynaysay maamulka Somaliland oo markaasi rabay inay socdaal ku tagaan degmada Taleex iyagoo loo dhaadhiciyey xabsi ku yaalla magaalada Garoowe islamrkaana lagu xukumay xarig dheer balse markii danbe cafis madaxweyne lagu siidaayey.
Mar idaacada Daljir weydiisey caaqil Ismaaciil Cali Koore sida wax u dhaceen, ayuu sheegay in gaari ay wateen niman shacab ah oo uu watey ganacsade Jaamac Cali shire ay rasaas ku fureen malleeshiyaad hubaysani halkaasoo uu ku dhintay alle ha u naxariistee Jaamac Cali Shire oo ahaa ganacsade caan ka ahaa deegaannada Puntland islamrkaana ay walaalo ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Puntland gen C/samed Cali Shire.
Dhinaca kale odayaasha iyo waxgaradka gobolka Sool ayaa wada dadaal dheer oo ay ku doonayaan daminta xiisadda dhextalla beelaha ay kasoo kala jeedaan dadkii shalay dhintay iyo kuwii wax diley, waxaana kusii qulqulaya degmadaasi cuqaal, issimo & waxgarad kale kuwaasi oo juhdi badan ku bixinaya daminta colaaddaasi waxaana la filayaa saacadaha soo socda in la isu keeno waxgradka labada dhinac.
Maamulka Somaliland ayaa marar badan ku goodiyey inay ka jawaabayaan tallaabadii hadda ka hor ciidamada Puntland ku qabteen qaar kamid ah saraakiil u shaqaynaysey, hase ahaatee tallabadan xilligan ay qaadeen ciidamada ka amarqaatay maamulka Somaliland ayaa u muuqata mid iska hor keenaysa beelaha deegaanka maadaama dad shacab ahi dhinteen.
Si kastaba ha ahaatee degmada Taleex ee gobolka Sool ayaa muddooyinkii dambe waxaa kajirey hardan siyaasadeed oo aad u ballaaran waxaana magaaladaasi hareeyey saamayn siyaasadeed oo ujeedooyin kala duwan leh. hore waxaa khilaaf uga dhex-taagnaa dadka deegaanka kuwaasoo qaar kamid ah u xaglinayeen maamulka Somaliland halka maamulka Puntland ay masuuliyiin u joogaan halkaasi, iyadoo arimahaasi is-dhex-yaalla ay qaska iyo jaah-wareera kaalmeeyeen.